Tababaraha Manchester United Jose Mourinho oo diirada u saaran seddexda saxiix bisha Janaayo - Jazeera FM
Tababaraha Manchester United Jose Mourinho oo diirada u saaran seddexda saxiix bisha Janaayo
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay diirada u saaran tahay inay seddex saxiix oo cusub ay sameyso inta lagu jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Ka dib markii ay keliya lix dhibcood ka qaadatay afar kulan oo ka badan Christmas, United waxay 15 dhibcood ka hooseysaa kooxda hogaanka heysa ee Manchester City, laakiin waxay u muuqataa in kooxda man United inay diyaar u tahay inay xoojiso bilowga 2018.
Sida laga soo xigtay wargeyska Daily Mail, daafaca midig, daafaca bidix iyo khadka dhexe ee weerarka ayaa ku jira qorshaha Jose Mourinho ee ah inuu kor u qaado fursadaha ay kooxdu ku dhameyndoonto booska labaad ee kaalinta labaad.
Inkastoo Ashley Young uu ka soo kabsaday daafaca midig iyo bidix, Matteo Darmian iyo Daley Blind ayaa lala xiriirinayay inay ka dhaqaaqayaan Old Trafford, taasoo keentay in Mourinho uu raadsado daboolka Antonio Valencia iyo Luke Shaw.
Goolalaha ayaa xaqiijiyay in ay yihiin arin ku aadan seddexda kooxood ee ugu dambeysa, waxaana lagu soo waramayaa in ciyaaryahanka khadka dhexe uu keeni doono ka hor dhamaadka bisha.
Duo Marouane Fellaini iyo Henrikh Mkhitaryan – oo bixiya sifooyinka kala duwan ee weerarka – ayaa sidoo kale soo jiitay xiisaha naadiyada kale
The post Tababaraha Manchester United Jose Mourinho oo diirada u saaran seddexda saxiix bisha Janaayo appeared first on Goolasha.net.
← Miralem Pjanic oo kusoo laabtay safka Kooxda, halka Buffon, Cuadrado
AC Milan oo ku dhaw Mousa Dembele? →